Chọọ ogo na mmemme anyị »Mahadum Hodges
Chọta Mmemme Nri Kwesịrị Ekwesị dị mfe.
Slọ akwụkwọ AWS
Ahụike Ọgwụ Ọrịa
Teknụzụ Ihe Ọmụma Kọmputa
Inye aka na eze
Ọzụzụ Nlekọta Uzo mbu
Ndị Heroes Hodges
Onye Nlekọta Ahụike Ahụ
Ọzụzụ na Ọzụzụ Ndị Ọzụzụ
Nyefee Enyi na Enyi
Findingchọtaghị ihe ị na-achọ? Ka anyị nyere aka. Naanị kụrụ otu bọtịnụ dị n'okpuru ma gbadaa iji hụ ndepụta nke mmemme dịnụ.
All Accounting -akpakọrịta Aviation Slọ akwụkwọ AWS Bachelor Business Ahụike Ọgwụ Ọrịa Communications Teknụzụ Ihe Ọmụma Kọmputa Kọmputa sayensị Ikpe ikpe omekome Inye aka na eze Echiche Digital EMS Bekee Dị Ka Asụsụ Nke Abụọ Gtọ asụsụ Bekee Asụsụ Bekee Apụta Finance Ọzụzụ Nlekọta Uzo mbu Asambodo gụsịrị akwụkwọ Health Nlekọta ahụike Hodges Jikọọ Hodges Kpọtụrụ Ndị Heroes Hodges Nnyocha Nyocha Nanị Eziokwu Ihe gbasara iwu Ịmụta ihe niile Management Marketing Master Nọọsụ Ntuziaka Ntanetị Onye Nlekọta Ahụike Ahụ Ọzụzụ na Ọzụzụ Ndị Ọzụzụ Psychology Technology Nyefee Enyi na Enyi Undergraduate Asambodo
Detuo Hylọ ọcha eze
Na-abịa oge adịghị anya! Mmemme Hodges Dental Hygiene ga-enye agụmakwụkwọ dị mkpa iji tolite n'ọhịa dị elu nke Dental Hygiene! Dabere na Ọrụ Onestop, Dental Assisting na-atụ anya itolite 23% site na 2026 na Florida. So n'ime ndị mbụ. Ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ ga-eto gị,…
Athzọ a ga-eduga ndị nwe ụlọ
Ọhụrụ ịzụta ụlọ? Nzukọ a nwere ihe niile ịchọrọ iji mee nhọrọ dị oke mma mgbe ị na-azụ ihe kachasị mkpa maka ndụ gị. Anyị ga-eje ije gị site na nkwụsị site na ntinye na akụkụ niile nke usoro ịzụrụ ụlọ wee mee ka ị mara maka ajụjụ ndị dị mkpa ị kwesịrị…
Direct Support Professional (DSP) Onodi Nkwupụta: Site na mmemme asambodo a, ị ga-enweta ọzụzụ iji nye ọrụ Nkwado Direct maka ndị nwere nkwarụ ọgụgụ isi na mmepe (dị ka Autism, Down Syndrome na ọtụtụ ndị ọzọ). Ga-enweta asambodo maka mebere na ndụ ọzụzụ na a gbaara ọkachamara. Ị ga…
Nabata na HU Direct, Otu Express Division nke Mahadum Hodges University Hodges na-enye asambodo ndị enyere ndị ọrụ aka na ogo ndị a na-achọ na mpaghara na gafere. Mpaghara gụnyere ahụike, teknụzụ, azụmaahịa, njikwa, na ego. Studentsmụ akwụkwọ nwere ike ịga klaasị na kampos, ịntanetị, yana site na Teknụzụ Teknụzụ Akụrụngwa (TEC), nke na-enye ohere…
Ntọala Cloud Cloud
Ọrụ Ntanetị Amazon (AWS) isgwé ojii Foundgwé ojii bụ ihe mbụ ị ga-eme n'ime igwe ojii ịkọwapụta ụwa nke AWS.
Ntọala nke eze na-enyere aka
Tinye taa! The Hodges Jikọọ Ntọala nke Mmemme Enyemaka Dental ga-enye ntọala dị mkpa iji bido n'ọhịa dị elu nke Inye Aka Dental! Dabere na Career Onestop, Dental Assisting na-atụ anya itolite 23% site na 2026 na Florida. Isi Mmemme Ihe omume a ezubere iji mata ọhụụ ọhụrụ coming
Bụrụ onye na-anya ụgbọelu na BS anyị na Studies Interdisciplinary na Aviation
Mmemme Asambodo Asambodo
Bido na Asambodo nke Asambodo Na Mahadum Hodges nke Asambodo Asambodo site na Mahadum Hodges ezubere iji nye gị usoro mmụta nke ụlọ ọrụ dị mkpa iji wuo nka gị ma na-agafe isi akara dị mkpa maka ogo ma ọ bụ bachelor. Ọzọkwa, anyị asambodo na-anapụta 100% online na-ekwe ka ị…
Center maka Kemgbe Ndụ Mmụta
Hodges Jikọọ. Ọzụzụ ọkachamara na ọzụzụ maka ndụ n'ezie na ezigbo nkà ụwa.
Nweta njikere na njikwa njikwa na ikike iduzi nke enwere ike itinye n'ọrụ na onye nlekọta akara izizi dị elu. Bụrụ njikọ dị n'etiti ijikwa ndị mmadụ na ọrụ kwa ụbọchị nke nzukọ. Nlekọta nlekọta gị nwere ike inye aka mee ka ndị ọrụ kachasị elu rụọ ọrụ, nke na - eduga na ọrụ ndị ahịa pụrụ iche. Usoro mbu a…
Mụta iji nkà na ọzụzụ nchịkwa na-eme ka ndị ọrụ nwee ike ilekwasị anya n'ihe dị mkpa n'ezie - ahụike onye ọrịa.
Mmemme Degree Science Science
Nweta nkà na ọzụzụ iji lekwasị anya na nlekọta ahụike na nyocha na Ahụike Ahụike.
Onye na-ahụ maka ọgwụgwọ anụ ahụ CAPTE Ọzụzụ akwadoro.
Ọrụ Ahụike Mberede (EMS) - Mmemme Paramedic
Mechie Ọzụzụ Paramedic na mmemme Mmemme Ahụike Mberede anyị.
Họrọ Hodges BSN iji zụlite nkà nọọsụ ịchọrọ iji meziwanye ụbọchị mbụ
Akwụkwọ Nlekọta Asambodo
Mụta Eziokwu Banyere Asambodo na Asambodo
Akwụkwọ Asambodo Ndị Pụrụ Iche.
Na-akpakọrịta Ogo Nlekọta
Enweghị Ezigbo Ihe Nlekọta Banyere Mmemme Degree anyị.
Eziokwu Banyere Ndị Ọrụ Anyị Akara Akara Bachelor.
Ngozi Master Master
Enweghị onye nzacha, Naanị Eziokwu Mmemme Degree Master na Hodges U.